‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को शिर्ष गीतमा र्‍यापर बने काली प्रसाद बास्कोटा (भिडियो सहित) - VOICE OF NEPAL
१ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:४६
300 ??? ???????
असोज ३ गतेबााट प्रदर्शनमा आउन लागेको रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को शिर्ष गीत सार्वजनिक भएको छ । र्याप शैलीमा तयार पारिएको गीतको भिडियो गायक तथा संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटा र अनुपम शर्मा र्यापरको भूमिकामा प्रस्तुत छन् । गीतलाई पनि दुबैले मिलेर लेखेका हुन् । गीतका निर्देशक विजु कर्माचार्य हुन् । भने, कन्सेप्ट काली स्वयंको हो ।